‘संविधानमाथि चित्त नबुझ्दैमा जंगल पस्नुपर्ने अवस्था छैंन’ – YesKathmandu.com
काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानमा चित्त नबुझे बन्दुक बोकेर जंगलमा जानुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चाहितका संघीय गठबन्धसँग छलफल गरिरहदा अध्यक्ष थापाले यस्तो मन्तव्य दिएका हुन ।
संविधानमा चित्त नबुझ्दौमा कोहीपनि जंगल पस्नु पर्ने अवस्था नरहेको औंल्याउँदै थापाले चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान हुन जरुरी रहेको बताए । अहिले सीमामा नाकाबन्दी गरेर जनतालाई दुःख दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन उनले भने जनताको माझमा गएर आफ्ना मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।
अस्ति मधेस झरेर मैले सुरक्षा निकायका अंगहरुसँग कुराकानी गरेको छु । ०५२ सालमा एउटा भरुवा बन्दुक, एउटा पेस्तोल र सय जना गुरिल्लाबाट सुरु गरिएको हिंसात्मक द्वन्द्व हामी सबैको आँखामा झलझली नाचिरहेको छ । र अहिले मधेसको समस्या के छ ? राज्यले यो हेर्नू जरुरी छ ।त्यसैले आगामी निर्वाचनको अनुकुल वातवरण बनाउनका निमित्त यथासम्भव चाँडो मधेसको समस्या सम्बोधन होस । थापाले भने ।
नेपाली सेनाको प्रवक्तामा कार्की
चाचामा प्रचण्डको बाचा : वावुरामजी र हामी फेरि एक हुने हो !
दश छोरी एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि बाबुले गरे अक्षयकोष स्थापन